ပါတနာ | /// stage /// – အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန် နည်းလမ်းသစ်
နိုင်ငံတကာ ဘရန်း : English Attack!
ဒေသတွင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဈေးကွက် မိတ်ဖက်များ
English Attack! သည် ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင် အင်္ဂလိပ်စာဘုံသုံးအဖြစ် ပျံ့နှံ့လာသည်နှင့် အမျှ ပို၍ လူကြိုက်များလာပါသည်။
The English Attack! ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် ဘာသာစကား ၂၆မျိုး ပါဝင်ပြီး တစ်နိုင်ငံခြင်းစီ၏ လိုအပ်ချက်အလိုက် (ငွေကြေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအလိုက် စသဖြင့်)ဘာသာပြန်ဆိုပေးထားပါသည်။
ဒေသတွင်းပါတနာများ နှင့် လုပ်ငန်းခွဲများ နိုင်ငံ ၃၀ကျော်တွင် ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
သင်သည် မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခု သို့မဟုတ် ဘာသာစကားသင်ယူမှုအထူးပြု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး English Attack! နှင့် ပူးပေါင်းလိုပါက မိတ်ဖက် အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။
The English Attack! လုပ်ငန်းခွဲများ ကွန်ယက်
English Attack! ကို သင့်နိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားပြုလိုပါသလား
The English Attack! လုပ်ငန်းခွဲများ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးနှင့် နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို နိုင်ငံဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အသေးစိတ်အလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ထိရောက်သည့် ဒေသန္တရအရောင်းမြှင့်တင်ရေးများကို ဆောင်ရွက်စေနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအနေဖြင့် သင့်တာဝန်မှာ သင့်ဈေးကွက်တွင် English Attack! ဘရန်းကို ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် လူထုဆက်ဆံရေးပညာတို့ဖြင့် လူသိများအောင် လုပ်ရန်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုကို ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘာသာစကားကျောင်းများနှင့် ကုမ္ပဏီများသို့ ရောင်းချရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ သင့်ဈေးကွက်အလိုက် ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများကို ပင်မ English Attack! မှနေ၍ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ကုမ္ပဏီသည် ဘာသာစကားသင်ကြားရေးတွင် တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားလျက်ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့မရှိနေသေးသည့် ဈေးကွက်တွင် ကိုယ်စားပြုလိုပါက သင်စိတ်ဝင်စားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။
တည်ထောင်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲများတည်ရှိသည့် နိုင်ငံများ
လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအဖြစ် တည်ထောင်ရန် လျှောက်ထားမည်
The English Attack! စီးပွားဖက် အစီအစဉ်
သင့်မီဒီယာတွင် English Attack! ကို ဖော်ပြမည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်အစီအစဉ်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။
English Attack! ကို သင့်မီဒီယာ (ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်၊ ဘလော့ဂ်၊ မဂ္ဂဇင်း) တွင် ကျွန်ုပ်တို့မှ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်သော ဘန်နာ၊ အိုင်ဖရိမ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်ပို့စ် သို့မဟုတ် printed inserts များဖြင့် သင်မှ အရောင်းမြှင့်တင်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်စေ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကိရိယာတိုင်းတွင် သင့်ပရိသတ်န်ှင့်ကိုက်ညီမည့် ပါဝင်မှုများ ရရှိပါမည်။
အွန်လိုင်း ဒတ်ရ်ှဘုတ်ဖြင့် သင့် ကန်ပိန်းနှင့် ကန်ပိန်းများမှ သင် ရရှိမည့် မှာယူမှုဝင်ငွေရှယ်ယာများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ စစ်နိုင်ပါမည်။
ဘာသာစကားသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် မီဒီယာတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနေပါက English Attack! မိတ်ဖက်ဖြစ်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။